यूएईमा कोरोना भ्याक्सिनको विश्वमै सबैभन्दा ठूलो ट्रा’यल ! नेपाली सहित ३१ हजार जना सहभागी – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/यूएईमा कोरोना भ्याक्सिनको विश्वमै सबैभन्दा ठूलो ट्रा’यल ! नेपाली सहित ३१ हजार जना सहभागी
अब स्वयंसेवकको लागि नाम दर्ता ब’न्द गरिसकिएको छ । स्वास्थ्य अधिकारीहरुले स्वयंसेवकहरुको संख्या पर्याप्त भइसकेकोले नयाँ स्वयंसेवक दर्ता ब’न्द गरिएको बताएका छन् । भ्या’क्सिन लगाउने स्वयंसेवकहरु नेपालसहित १२० भन्दा धेरै देशका नागरिकहरु छन् ।स्थानीय अधिकारीहरुले कम समयमै भ्या’क्सिनेशनको लक्ष्य पूरा गरेकोमा स्वास्थ्य कर्मचारीहरु र स्वयंसेवकहरुको प्रशंशा गरेका छन् ।यूएईमा ट्रायल गरिएको यो भ्या’क्सिनलाई चीनले तयार गरेको हो । चीनको कम्पनी सि’नोफार्मले संयुक्त अरब इमिरेट्सको जी ४२ हे’ल्थकेयरसँग मिलेर ट्रायलको अ’भियान चलाएको हो ।
७० करोड मात्रै नभई साढे छ अर्ब रुपियाँ घो’टाला भएको दा’वी